U8850 Version 2.3.7 ကို Downgrade 2.3.5 ဆင်းပြီး Root လုပ်မယ်။ : Myanmar Mobile Software Developer
U8850 Version 2.3.7 ကို Downgrade 2.3.5 ဆင်းပြီး Root လုပ်မယ်။
Download Link တွေကိုပြန်လည်ပြီး Update လုပ်ပေးလိုက်တာပါ…….
Huawei U8850 ကို Version 2.3.7 နဲ့ရောက်လာတယ်။
Root လုပ်လို့မရဘူးဗျာ။ဒါနဲ့ Downgrade ဆင်းပြီး လုပ်တော့ရတယ်။
2.3.5 တော့ ဖြစ်သွားတာပေါ့။
ပထမဆုံးဒါလေးတွေအရင် Download ဆွဲနော်။
ဒါလေးတွေဆွဲပြီးရင်တော့ Ok ပြီနော်။
Unlock Root.exe ကို လဲ ဆွဲလိုက်ပါအုံး။
Upgrade tool SUTL3_v1.8.4.zip ကို Extract လုပ်လိုက်ပါ……
Pack 1 ကို Extract အရင်လုပ်လိုက်ပါ။
Setup.exe ကို Run ပါ။
ကျန်တာတွေကို Auto Install လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ပြီးသွားရင်တော့ C:/Program File ကိုပြန်သွားပြီး
SUT L3 Folder ကို ရှာပါ။
Folder ထဲက Software update Tool.exe ကို Runပါ။
Run လုပ်ရင် Software update Tool က File တောင်းပါလိမ့်မယ်။
SFC-243P-0-8005-A01.nb0 ဒီဖိုင်ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် Next လေးနှိပ်လိုက်တော့ ရပါပြီ။
USB နဲ့လည်းချိတ်ထားနော်ဖုန်းကို တော်ကြာ Next မပေါ်ပဲနေအုံးမယ်။ အားလုံးပြီးလို့ဖုန်းပြန်တက်လာရင် 2.3.5 နဲ့တက်လာပါလိမ့်မယ်။
ကဲ firmware ကိုတော့ နှိမ့်ပြီးပြီ။
အဓိကလိုချင်တာက Root လေ။
ဒီတော့ Root လုပ်ကြတာပေါ့။
အမှန်လေးတွေခြစ်မယ်။သိတယ်နော် အမှန်လေးတွေ ကို တော့ မပြောတော့ဘူး Driver ထဲမယ်။ Huawei Driver ဆိုရပါတယ်။
Unlock Root Tool ကို Run ပြီး Root နှိပ်လိုက်ရင် အသံလေး ၃၊၄ ချက်မြည်
ပြီး Root ရပြီပေါ့.နော်။
Comment ပေးပြီးအမောပြေအောင်လုပ်ပေးပါ။ ပြန်ပြီးတော့ Dead Link တွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…….
Filed in: Firmware တင်နည်းများ, Root လုပ်နည်းများ U8850 Version 2.3.7 ကို Downgrade 2.3.5 ဆင်းပြီး Root လုပ်မယ်။
29 Comments on "U8850 Version 2.3.7 ကို Downgrade 2.3.5 ဆင်းပြီး Root လုပ်မယ်။"
reloj | January 11, 2014 nyilwin says: September 18, 2012 at 2:59 am ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါကြောင်း နောက်လည်းများများတင်နိုင်ပါစေ
Reply Ko Phyo says: October 4, 2012 at 3:19 am huawei U 8818 ကို 4.0.3 ကနေ 2.3.6 downgrade ဆင်းချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ..ကူညီပါဦး…
Reply ဖြိုးချမ်း says: October 4, 2012 at 4:55 am စမ်းကြည့်နေပါတယ်။ U8818 က 2.3.6 Dload ဖိုင်ကို Update Fail ပဲဖြစ်နေတယ်။ OLD Rom ပြန်ထည့်လိုက်ရင် အဆင်ပြေတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။
Reply Sithu says: October 8, 2012 at 2:24 pm ကျေးဖူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
Reply စိုင်းနော်လျန်း says: October 15, 2012 at 3:47 am အကိုတို့ရေ..
ကျွန်တော် download link part 1 ကို ဆွဲလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်…
နောက်တစ်မျိုးဆွဲသေးတယ်.. Ultrasurf နဲ့လဲဆွဲကြည့်သေးတယ်.. မရဘူး
နောက်တစ်ခုက downgrade ဆင်းဖို့ 2.3.5 နောက်တစ်ခုကို ဆွဲသေးတယ်..
ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ File က SFC-244F-0-8005-A03.nb0 ဒါလေးပါ..
SUT ကိုလဲဆွဲပီးဘီ… Run တော့.. ဒုတိယမြောက် next က မှိန်နေတယ်…
သူ့ကိုရွေးတယ်… မရဘူး မှိန်နေတယ်…
Reply toelay says: October 16, 2012 at 5:59 am can’t download part1 , the host website have deleted the file ..plz reshare…
Reply ဖြိုးချမ်း says: October 22, 2012 at 11:10 am အကုန်လုံးကိုပြန်တင်ပေးထားပါတယ်……. Unlock Root ကိုတော့ ပြန်မတင်ပေးရသေးပါဘူး…..ရှာဒေါင်းလိုက်ပါ…..
Reply ocean says: December 19, 2012 at 11:59 am ဘယ်မှာ ပြန်တင်ထားတာလဲ ညီ ..ရှာမတွေ့လို့
Reply mkk says: October 25, 2012 at 7:42 pm part 1 က ဆွဲမရတော့ပါဘူးခင်ဗျာ ပြန်တင်ပေးပါဦး
Reply Thiha says: November 5, 2012 at 5:34 pm ဟုတ်တယ်အစ်ကိုရေ Part 1 Link လေးပြန်စစ်ပေးပါအုံး
Reply KO NAING says: December 3, 2012 at 4:51 pm download link part 1 ဆွဲမရပါဆရာရေ…ကူညီပါအုံးနော်
Reply Thiha says: December 14, 2012 at 2:09 am download link part 1 ဆွဲမရပါ ကူညီပါ….အရေးကြီးလို့ပါ အစ်ကို
Reply Dastan says: January 29, 2013 at 8:24 am thz U
Reply thetpaing says: January 31, 2013 at 5:08 am update fail ပဲ ပြနေတယ်ဗျာ… part 1 ကို ဘယ်က နေ ရ အောင်ဆွဲ ရ မှာ လဲ ပြောပါအုံးဗျာ…….
Reply လူကြီး says: February 9, 2013 at 9:45 pm ဒေါင်းလုပ် လင့်ခ် တွေက ဘယ်မြန်မာဆိုဒ်မှာမှ
မရပါဘူး ကျန်တော်အားလုံးကို စမ်းပြီးပြီး အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်
ဒေါင်းလုပ် ဆွဲလို့ ရမဲ့ လင့်ခ် ကို ကြာရှည်ထားခံမယ်
ဆိုဒ်ကနေပြီးတော့ပဲ တင်ပေးပါဗျာ အခုနောက်ပိုင်း
ဆိုဒ်တွေက ဒေါင်းလုပ် လင့်ခ် ကို အကြာကြီးမပေးတော့ပါဘူး
Reply kitoekyaw says: February 15, 2013 at 4:36 am အကိုဒေါင်းမရဘူးfirmware သေသွားတဲ့စက်ကိုဒီနည်းအတိုင်းလုပ်ရင်အဆင်ပြေမလားအကိုပြောပေးပါ
Reply komin says: February 26, 2013 at 6:04 am အစ်ကိုရေ ဒါလေး Upgrade tool SUTL3_v1.8.4.zip ဒေါင်းချင်တာဗျာ လိုချင်တာ ဘယ်လိုမှဒေါင်းမရဘူးလုပ်ပါဦး
Reply Zaw shinn says: March 7, 2013 at 5:51 am ဘာမှဒေါင်းလို့မရပါလား 2.3.7 မြန်မာစာဖတ်မရလို့ 2.3.5 ပြန်ဆင်းပီးလုပ်မလို့ အရေးကြီးလို့ဆွဲလို့ရမဲ့လင့်ခ်လေးရှိရင် ပြန်တင်ပေးပါဗျာ
Reply zarni says: March 14, 2013 at 3:47 am download link was dead
Reply galaygachay says: March 14, 2013 at 6:55 pm ကျွန်တော်ဝင်ရောက်လျှာရှည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး…….ကျွန်တော်လည်း ဒီဆိုက်ထဲက လိုတာမှန်သမျှလာလာဝင်ပီးယူယူသုံးနေရတဲ့ သာမန်ယူဇာလေးပါဘဲဗျာ……..ဒီပို့စ်မှာတင်ထားတဲ့ကိုဖြိုးချမ်းပြောသလိုပါဘဲ 8850 အတွက် မြန်မာဆိုက်တွေမှာတင်ထားသမျှလင့်တွေသေနေတယ်ဆိုတာအမှန်ပါဘဲ …. နိုင်ငံခြား ဆိုက်တွေမှာလည်းလင့်တွေမရှိတော့ပါဘူး………….. ဒုက္ခကြုံနေရတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ကျွန်တော်ဝင်ရောက် ရှင်းပေးခြင်းသာဘဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ………ကိုဖြိုးချမ်း ရဲ့ပိုစ့်ကိုလည်း ၀င်ရောက်နှောက်ယှက်ချင်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျား…….. (ကျွန်တော့်အတွက်နဲ့ ကိုဖြိုးချမ်း စိတ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်လည်း တောင်းပန်းပါတယ်) ဘ၀တူ အကူအညီလိုသူများအတွက် တထောင့်တနေရာကနေ တတ်အားသလောက်ဝင်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တဲ့ ဆန္နလေးဘဲရှိပါတယ်…
Huawei U8850 2.3.7 Root
Huawei U8850 Android 2.3.7 ကိုအောင်မြင်စွာ Root လုပ်နိုင်ပါပီ…….သိပီးသားလူတွေရှိရင်လည်း ထားလိုက်ပါတော့….မသိရသေးတဲ့သူများအတွက်ပါ 2.3.5 ကိုပြန်ဆင်းပီး root စရာမလိုတော့ပါဘူး…………2.3.7 ဆလိုဗေးနီးယား firmware ကိုအခြေခံပီး root ဖောက်ထား တာပါ……(ကျွန်တော်ကိုတိုင်ဖောက်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်) ကိုယ်တိုင်တော့ စမ်းသပ်ထား ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် …..အောင်မြင်ပါတယ်…….ကဲစပါပီ အရင်ဆုံး firmware ဖိုင်ကိုဆွဲရပါမယ် … လင့် ၂လင့်လုံး ဒေါင်းရပါမယ်
(part 1) 112 MB
(part 2) 111 MB
ဒီလင့် ၂ လင့်ဒေါင်းပီးသွားပီဆိုရင်တော့ firmware ကို update လုပ်ဖို့အတွက် Huawei firmware update tool ကို အောက်ကလင့်ကနေဒေါင်းလိုက်ပါ
ဒါတွေအားလုံးဒေါင်းပီးသွားရင်တော့ ပထမဦးဆုံး ဆွဲထားတဲ့ firmware file ကိုဇစ်ဖြည်လိုက်ပါ… ဖိုဒါလေးနဲ့ဘဲထားလိုက်ပါ…… နောက်ဆုံးဆွဲထားတဲ့ huawei firmware update tool ကိုဇစ်ဖြည် ပီးတော့ Computer မှာ install လုပ်လိုက်ပါ …… ၁၀မိနစ်လောက်တော့ ကြာမယ်ထင် တယ်ဗျ…….အားလုံး အင်စတောလုပ်ပီးသွားရင်တော့ ……. ဖုန်းကို ထုံးစံအတိုင်း USB Debugging On ပေါ့ဗျာ….. Unknown Source ပါအမှန်ခြစ်ပေးထားလိုက်……..usb ပေါက်ထိုးပီးတော့ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာကို ဆက်သွယ်ထားလိုက်ပါ…… ဖုန်းကို ကွန်ပြူတာက သိပီဆိုရင် လုပ်ငန်းစလို့ရပါပီ…..
Huawei firmware update tools ထဲက ဘောက်စ်လေးထဲမှာ အစောက ဇစ်ဖြည်ထားတဲ့ firmware ဖိုဒါထဲက Huawei.Vision.U8850.Rooted.nb0 ဖိုင်လေးကိုရွေးပေးပီးတော့
next နဲ့သာဆက်သွားလိုက်ပါတော့ သူ့ဟာသူ firmware အင်စတောလုပ်ပီး ဖုန်းကို reboot ချသွား ပါလိမ့်မယ်…….ဖုန်းပြန်တက်လာရင်တော့ super user access ရတဲ့ ဖုန်းလေး ပိုင်ဆိုင် သွားပါပြီ…….အဲ firmware အသစ် ပြန်တက်လာပီးရင်တော့ ဖုန်းကို factory data reset ချဖို့တော့ လိုပါတယ်နော်……..Setting ထဲက Privicy ထဲကနေပီးတော့ reset ၀င်ချလိုက်ပါ
(firmware) တခုလုံးကို ပြန်ပီးတင်တဲ့အတွက် မိမိရဲ့ဖုန်းကို firmware အသစ်မတင်မီမှာ ဖုန်းနံပါတ် တင်ထားတဲ့ application တွေကိုတော့ ကြိုတင် Backup ယူထားဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့နော် ….. ကဲ U8850 ကိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေဗျာ……..
မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ပီးတော့ ပျက်စီးမှုတစုံတရာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်နဲ့သက်ဆိုင်မှု
မရှိကြောင်းပါ…… ကျွန်တော်ကတော့ အခုဗားရှင်းကို အောင်မြင်အောင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စမ်းသပ်ထားပီးကြောင်းထပ်မံပြီးတော့ အာမခံပါတယ်…….
Reply ဖြိုးချမ်း(Admin At MMSD) says: March 18, 2013 at 7:32 am အရမ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ဒီ Firmware ဟာလဲတော်တော်များများမှာလင့်သေနေပါပြီ….
Reply phyoghost says: March 23, 2013 at 8:56 am ကျတော်က တမျိုး ဗျ ………..ဖန်းဝဲ က တင်လိုက်ဖျက်လိုက်နဲ့ ကျတော် ယူ၈၈၅၀ လေး ဟာဝေးလိုဂိုမှာတင်ရပ်သွားတာ……………….SUT ကလဲ အလုပ်မလုပ်တော့လို့ ကူညီနိုင်ရင်ကူညီပေးကြပါ………………………………………………
Reply aungaung says: March 23, 2013 at 2:46 pm ကိုဖြိုးချမ်းရေအကိုဒေါင်းပြီးသားရှိရင်ပြန်တင်ပေးပါနော်
Reply aungaung says: March 23, 2013 at 11:43 am လင့်သေနေတယ်ကိုဂလေဂချေရေ။ရှဲပေးတာကေျးးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
Reply zawminaung says: March 15, 2013 at 3:37 am ကျေးဇူးပဲအကိုရေဆွဲသွားပြီဗျို. အဆင်ပြေတယ်ဗျ ကျွှန်တော်ကတော.
Reply phyoghost says: March 23, 2013 at 8:53 am ကျတော်က တမျိုး ဗျ ………..ဖန်းဝဲ က တင်လိုက်ဖျက်လိုက်နဲ့ ကျတော် ယူ၈၈၅၀ လေး ဟာဝေးလိုဂိုမှာတင်ရပ်သွားတာ……………….SUT ကလဲ အလုပ်မလုပ်တော့လို့ ကူညီနိုင်ရင်ကူညီပေးကြပါ………………………………………………
Reply kozawye says: April 13, 2013 at 3:03 am အကိုရေ ကျွန်တော် Nuolida NLD N1 andriod ဖုန်းလေး ရှိပါတယ် . root လုပ်လို့ မရလို့ပါ…version က 2.3.6 ပါ…
Reply ye htet aung says: May 22, 2013 at 12:10 am thanksalot pr byar